[Waxqabadka Joojiyay] NORA Qeybta Gaarka ah | Ururka Horumarinta Dhaqanka Ota Ward
[Tirtiridda waxqabadka]NORA gaar ah
Naadiga Shimomaruko JAZZ	[Tirtiridda waxqabadka]NORA gaar ah
~ Mashruuc qaas ah oo ka socda Shimomaruko Citizen's Plaza oo sii socday ilaa 1993 ~
"Kooxda Ota Ward Latinization Plan Band" oo ay hoggaaminayaan DIVA "NORA" oo ka kala yimid adduunka oo idil ayaa halkan jooga!
◆ Naadiga Shimomaruko JAZZ <May> NORA Ogeysiiska Waxqabadka Waxqabadka Gaarka ah * Waxaa lagu cusboonaysiiyay 5/5
Marka laga hadlayo waxqabadka "Shimomaruko JAZZ Club <May> NORA Unugga Gaarka ah" ee loo qorsheeyay waxqabadka Ota Ward Plaza Small Hall Khamiista, Maajo 5-keeda, hal bandhig ayaa noqon doona Coronavirus-ka cusub. aan laga maarmi karin baajinta waxqabadka iyadoo la tixgelinayo amniga iyo amniga macaamiisheenna, jilayaal iyo shaqaalaheena.
Qeybta Dhiirigelinta Dhaqanka iyo Farshaxanka 03-3750-1555 (10: 19-XNUMX: XNUMX)
Khamiis, Abriil 2021, 5
18:30 bilaaban (18:00 furan)　18:00 bilaaban (17:30 furan)
Taariikhda la sii daayo: Abriil 2021, 4 (Arbaco) 14: 10-
Dhammaan kuraasta ayaa la hayaa * Waxqabadka ayaa la joojiyay
Dhimista Dambe [19: 30 ~] 1,500 yen (waa haddii ay kuraas ka hadho maalinta)
Sicir-dhimista khadka tooska ah waxay dhammaan doontaa Maajo 2021, 5 (Arbaco).
Si looga hortago fiditaanka cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus virus', kuraasta oo dhan waa la keydiyay, cuntada iyo cabitaanka looma oggola, nidaamkiina gebi ahaanba waa la beddelay.
Si looga hortago faafitaanka infekshinka cusub ee coronavirus, waxyaabaha ku jira waxqabadka sida waqtiga lagu haysto ayaa is beddeli kara.
Faahfaahinta Naadiga Shimomaruko JAZZ